SAADAAL: Everton 3-1 Liverpool - Wariyeyaasha Daily Mirror Oo Saadaaliyey Natiijada Kulanka Adag Ee Merseyside Derby - Gool24.Net
SAADAAL: Everton 3-1 Liverpool – Wariyeyaasha Daily Mirror Oo Saadaaliyey Natiijada Kulanka Adag Ee Merseyside Derby
Merseyside derby ayaa maanta goob joog loo ahaan doonaa natiijada kasoo baxda, waana ciyaartii ugu adkayd abid ee labadan kooxood, sida ay khubarada ciyaaruhu tilmaameen.
Liverpool ayaa iska xaadirin doonta garoonka Goodison Park oo ay ugu tegayso Everton oo si weyn isku dhistay, isla markaana haysata farsamo-yaqaanka faylasuufarka ah ee Carlo Ancelotti oo lagu tixgeliyo inuu ka mid yahay macallimiinta ugu khibradda iyo waayo-aragga badan ee dunida jooga waqtigan.
Everton ayaa bandhig ciyaareed cajiib ah samaynaysay intii uu horyaalka Premier League bilaabmay, waxaana dhamaan afartii ciyaarood ee ay dheeshay ay ka keentay guulo waaweyn iyadoo hoggaankana haysa, waxaana ciyaartooda tiir-dhexaad u ahaa Dominic Calvert-Lewin oo gool-dhalin cajiib ah sameeyey, isla markaana sagaal jeer shabaqa soo taabtay. Waxa ka dambeeya oo khadka dhexe kubbadaha ka hagaya, caawin iyo ciyaar sarraysana ka samaynaya James Rodriguez.
Liverpool ayaa dhinceeda guul-darro weyni kasoo gaadhay ciyaartii Aston Villa oo 7-2 lagu xasuuqay, waxaana Jurgen Klopp uu ciyaartoydiisa farriin qoraal ah oo uu u diray uu ugu sheegay inuu uga baahan yahay inay garoonka dhexdiisa kaga jawaabaan oo ay guul ka keenaan kulanka Everton.
Sadio Mane iyo Thiago Alcantara oo xanuunka Korona Fayras u jiifay kulankii Aston Villa ayaa diyaar ah maanta, waxaase aan joogin goolhaye Alisson Becker oo dhaawac ah iyo Naby Keita oo Korona Fayras u jiifa.
Wariyeyaasha wargeyska Daily Mirror ayaa saadaal ka bixiyey kulankan adag, waxaanay intooda badan isku raaceen inay ciyaartani ku dhamaantoonto barbarro ay dhibcaha ku wadaagi doonaan.
Siddeed ka mid ah wariyeyaasha khubrada ah ee Mirror oo saadaashan bixiyey, mid kaliya ayaa sheegay in ciyaartu ku dhamaan doonto barbarro goolal la’aan 0-0 ah, taas oo ah wax ay labada kooxoodba ka ordyaaan. Laakiin afar kale ayaa iyaguna natiijooyin goolal ah usii sheegay balse wada barbarro ah.
Saddex kale ayaa iyaguna labada kooxood libinta kala siiyey.
Andy Dunn oo ka mid ah ragga khubarada ah ee Daily Mirror ayaa Everton ka farxiyey oo u sheegay inay guul weyn oo 3-1 ah ka gaadhi doonaan Liverpool marka ay waqtiga qadada ku qaabilaan garoonka Goodsion Park, taas oo ah wax ay jecel yihiin ciyaartoyda iyo tababare Ancelotti inay u rumowdo.
Balse labada khabiir ee kale ee David Anderson iyo Mark Jones ayaa dhinaca Liverpool libinta siiyey, waxaanay Jurgen Klopp iyo xiddigihiisa ugu bushaareeyeen inay niyadda sii gashadaan guul rafaad badan oo 2-1 ah oo ay kala hoyan doonaan kooxda ay deriska yihiin ee Everton.
Halkan kaga bogo saadaasha wariyeyaasha Daily Mirror:
Simon Mullock – Everton 2-2 Liverpool
Neil Moxley – Everton 1-1 Liverpool
James Nursey – Everton 1-1 Liverpool
Andy Dunn – Everton 3-1 Liverpool
David Maddock – Everton 1-1 Liverpool
Mike Walters – Everton 0-0 Liverpool
David Anderson – Everton 1-2 Liverpool
Mark Jones – Everton 1-2 Liverpool